PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Uzovela enkantolo uthisha oqhumise umfundi indlebe ngempama
Uzovela enkantolo uthisha oqhumise umfundi indlebe ngempama
Isolezwe - 2017-09-14 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
USOBISHINI uthisha waseSenzakahle High eNgwegweni, eNkandla, emuva kokuba evulelwe icala lokudabula umfundi wentombazane oneminyaka ewu-14 ngempama emphindelela.
Kuthiwa lo thisha wesilisa esingeke simdalule ngenxa yokuthi akakaveli enkantolo, washaya lo mfundi phambi kwabanye ngenyanga edlule.
Uninakhulu walo mfundi, ongeke adalulwe ukuvikela umfundi, uthe ufuna ubulungiswa ngoba umzukulu wakhe ulimele kabi endlebeni, kuthiwa kunendawo evuvukele ngaphakathi.
Ngokusho kwakhe, isisusa sendaba kwaba ukukhala kocingo lomunye umfundi, okuthiwa lwalukhala ingoma kamaskandi, omunye uthisha efundisa base behleka abafundi.
Lo thisha waya ukuyobika kwase kufika lo wesilisa waphuma iqhubu nale ntombazane wayishaya.
‘’Udokotela uthe ngeke akwazi ukumelapha ngoba kufanele kuqale kubohle le ndawo edumbile evalekile ngaphakathi endlebeni, kuyacaca ukuthi ulimele kabi lo mntwana. Wayeze ephume iqhubu nengane yomtanami yodwa nje, ngoba eyizwe ithini.”
Uthe ngesikhathi eya esikoleni wayezitshela ukuthi lo thisha uzozehlisa, wavele wakhuluma ukwedelela wathi akadlulele emaphoyiseni uma ecabanga ukuthi azomsiza.
“Ngiyile ukuyovula icala ngoba ngifuna ubulungiswa, kufanele umthetho uthathe indawo yawo ngoba angisazi ngenze njani,” kusho ugogo ngokukhathazeka.
USihlalo wesigungu esilawula isikole (SGB), uMnuz Gcinumuzi Dlamini, uthe bakhathazekile ngalesi simo ngoba lo thisha usanda kufika (ngoJulayi) akethulwanga nakubona beyisigungu, bamangele sebezwa kuthiwa udabula abafundi ngezimpama manje.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Kwazi Mthethwa, uthe njengoba abazali bevela ubuthaphuthaphu bebika la macala kuyacaca ukuthi maningi abefihliwe kodwa manje sebeyawethemba umnyango ngoba uyasukuma ulungise isimo.
“Kuzofanele udaba lubikwe kumhloli omkhulu alusukumele ngoba kuyicala ukushaya umuntu.
“Uma lubehlula bazoluletha kithi kodwa kufanele abantu baqale babike kothishomkhulu nakubahloli ngaphambi kokuza kithina,’’ kusho uMthethwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal uLieutenant Colonel Thulani Zwane ukuqinisekisile ukuthi livuliwe icala lokushaya.
“Idokodo lidluliselwe ehhovisi likamqondisi wezokushushisa ukuze ithathe isinqumo,” kusho uZwane.